पेमा | bishnunmdc
Posted on November 8, 2019 by bishnunmdc
जनमत मासिक २०७६ भदौ अंक २६३ मा प्रकाशित कथा । धन्यवाद सहित साभार
एकाबिहानै त्यस्तै चार बजेको हुँदो हो पेमाको घरमा फोनको घण्टी लगातार बज्न थाल्यो । त्यति सबेरै कहिल्यै फोनको घण्टी बजेको थिएन । पेमा हत्त न पत्त उठिन् । फोन उठाइन् ।
‘पेमा गुरुङ रोकाया हो ? ’ कल्याङमल्याङ आवाजको बीचबाट कसैले सोध्यो ।
उनले ‘हो’ भनिन् ।
‘दोर्जी रोकायाको मृत शरीर महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालको मुर्दादान घरमा छ । तपाईं छिटै आउनु ।’ भन्दै फोन राखिदियो ।
अस्पताललाई आँखा र शरीर दान गर्ने सम्झौतापत्रमा दोर्जी रोकायाले घर–परिवारको सबै विवरण दिएका थिए । त्यसैको आधारमा आफ्नो पतिको मृत्यु भएको खबर पाइन् पेमाले । दश वर्षपहिले नै सुकिसकेका आँशु एक पटक फेरि उनको दुवै आँखामा टिलपिल भएर देखा परे ।
लास ढाकिएको सेतो कपडा पन्छाएर हेरिन् । अनुहार उज्यालो थियो । लख काटिन् ‘मृत्युको बेला कठोर पीडा भएनछ ।’ लामो सास फेरिन् । चालिस वर्षसम्म दुई शरीरलाई एउटै जस्तो बनाएर दोर्जी र पेमाले पारिवारिक जीवनका थुप्रै उकाली–ओराली नापे, हिमाली भञ्ज्याङको हिउँ र चिसो सिरेटोलाई अँगालो हालेर निस्तेज पारे, छार्कामा आलु र उवा उमारे, याक खेद्दै तिब्बत पुगेर नुन र खाद्यान्नको जोहो गरे, भेडाच्याङ्ग्रा लिएर मुस्ताङ हँुदै पोखरासम्म पुगे, काठमाडौँमा घरजम गरे, छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा लिन अमेरिकासम्म पठाए । प्रकृतिले दिने नीलो सफा आकाश, छार्का खोलाको नीलो कञ्चन पानी, फुस्रा बलौटे पहाडमाथि टलक्क टल्कने लोभलाग्दा हिमाल, मौसम परिवर्तन हुनासाथ देखिने कालो बादल, हिमपात, ढुङ्गा र गेगरसहितको हिले भेलजस्तै उनीहरूको जीवनमा पनि सुख र दुःख शरीरसँग छायाँ भएझैँ सँगै भए । उनीहरूले जीवनमा खेपेको कष्ट, गरेको मेहनत र देखिएको प्रगतिले ठूलो प्रेरणा दिएको थियो दोर्जीको जन्मथलो डोल्पाको छार्का र पेमाको माइती देश मुस्ताङको साङता गाउँलाई ।
हिमाली क्षेत्रमा अपत्यारिलो किमिमले मौसममा परिवर्तन आउँछ । टहटह घाम लागेर नीलो आकाश देखिएको केही पलभित्र नै कालो बादल उठेर चिसो सिरेटो हुइँकिनुका साथै फाटफुट पानीसँगै हिउँ पर्न थाल्छ । रातभर हिउँ प¥यो भने भञ्ज्याङ छिचोल्न सकिन्न । अचानक डोल्पाको मौसममा परिवर्तन आएझैँ बिहे गरेको चालिस वर्षपछि पेमा र दोर्जीको जीवनमा पनि पत्याउनै नसकिने भयानक हिमपात भयो । दुई दम्पत्तिबीच विग्रह उत्पन्न भयो । कानुनी तवरले छुटानाम नगरी उनीहरू १५ वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै बसेका थिए ।
डोल्पा छार्काकै आफन्त डोल्मालाई लिएर उनी शिक्षण अस्पताल पुगिन् । लाश दान गरेको कुरा त्यहाँ पुगेर मात्र थाहा पाइन । तीन छोराछोरी अमेरिकाबाट नफर्कुञ्जेल लाशलाई प्रयोगशालामा नलैजान आग्रह गरिन् । स्वयम्भू घर फर्किन् । अमेरिकामा उच्च शिक्षा हासिल गरी काम गर्न थालेका एक छोरी र दुई छोरालाई फेसटाइममार्फत बाबुको मृत्यु भई लाश महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालको मुर्दादान घरमा रहेको जानकारी दिइन् ।
समयको पदचापलाई राम्रोसँग केलाउन नसक्दा धेरै मानिसको मनभित्रको घर मुर्दाघर जस्तै भएको छ आजकल । आमाबाबु र छोराछोरीबीचको सोचाई र व्यवहार पुस्तौँपुस्ताबीच देखिने अन्तरजस्तै भएको छ । व्यवहारमा हातमुख जोर्न कठिन छ तापनि सामाजिक सञ्जालले गर्दा अन्तरिक्ष यात्रामा तल्लीन छन् सन्तान । अनि आमाबाबु र छोराछोरी बीच गहिरो खाडल बनेन त ? सम्पन्न भएर पनि बोल्ने साथीसम्म नहुँदा एकलकाँटे भएका छन् सत्तरी नाघेका मातापिताहरू कतै सहर त कतै गाउँमा । त्यस्तै भयो पेमाको घरमा पनि । पुरातन घमण्डले पेमाको परिवार पनि खण्डित भएको थियो । बाबु–आमा आ–आफ्नो संस्कार, संस्कृति र पौराणिक परम्परा बचाउने सोच र घमण्डमा थिए । छोराछोरीलाई अमेरिकामा स्वतन्त्र भएर बग्ने हावापानीले चुर्लुम्ब डुबाएको थियो ।
मृत्युले कठोर प्रहार गरेको थाहा पाएपछि नेपालको रातको दुई बजेको आसपासमा जेठो छोरा, छोरी र कान्छो छोरालाई क्रमशः एक–एक मिनेटको फरकमा दोर्जीले करिब सत्र वर्षपछि फोन गरेका थिए । तीनै जनाको फोन कार्यालयको सचिवालयमा भएकाले उठाउन नसकेको कुरा आमालाई छोराछोरीले पछि सुनाएका थिए ।
यता पेमाले पनि राति एक पचपन्न बजे बाबाको फोन आएको तर आफूले थाहा नपाएको कुरा छोराछोरी, ज्वाइँ, बुहारी, नाति र नातिनीहरूलाई भनिन् । अमेरिकामा नै भए पनि तीनतिर भएका छोराछोरी सबैलाई पालैपालो फोन गरिन्, बाबुको मृत्यु भएको खबर सुनाइन् र सबैसँग आँशु साटासाट गरिन् । सबै भावविह्वल भए । बाबुसँग कुराकानी नभए तापनि जिउँदो हुँदा बाबा आपूmसँगै भएको र बाबुको तातो मायाको आभासले आफू निर्देशित भएको छोराछोरीले आमासँग आँशु झार्दै भने । बाबुको मृत्युको खबरले भने क्षणभर उनीहरूका लागि अमेरिका नै अँध्यारो भयो, हातखुट्टा लुला भए पेमाका मायाका टुक्राहरूको ।
नेपालमै भएर पनि के गर्नु र ? पेमाले दोर्जीको स्वर नसुनेको पन्ध्र वर्ष भएको थियो । बोलेर मात्र माया साटिँदो रहेनछ । नबोले पनि मुटुको एक भागमा कसैले नदेख्ने गरी दोर्जीले पेमालाई सजाएर राखेका थिए । खोक्रो आधुनिकता, व्यक्तिगतपन र पुरातन संस्कारको लडार्इंको बीच उनीहरूको बुढ्यौलीे प्रेम निरीह बनेर एक्लिएको थियो ।
‘परिवेशले मलाई अन्धो बनायो । मैले पनि माया नगरेकी त होइन तर मैले आक्रोशलाई नियन्त्रण गर्न सकिनँ । मेरै दिनहुँको कचकचले गर्दा नै ऊ सत्तरी वर्षको उमेरमा एक्लै बस्न बाध्य भएको हो । उसले त मृत्युले आक्रमण गर्न थालेको थाहा पाएपछि फोन गरे छ नि ! मेरो आक्रोशको परिणामले मर्ने बेलाको अन्तिम स्वर पनि सुन्न पाइनँ । म बाँचुञ्जेल पछुतो त्यही नै हुने भयो । ’ पेमाले आफैँलाई धिक्कार्दै भनिन् ।
पानीको मुल चैतमा सुकेर साउनमा फेरि फुटेझैँ करिब दश वर्ष रुँदा सकिएका पेमाका आँशु दोर्जीको मृत्युको खबरले फेरि बग्न थाले । चालिस वर्ष सँगै र पन्ध्र वर्ष एक्ला–एक्लै बिताएका सम्झनाका क्षणहरू छालझैँ उर्लेर उनको अगाडि नाच्न थाले । उनीहरूको प्रेम बसेको मुस्ताङ साङ्ता गाउँका फुस्रा बलौटे पाखा, पखेरा, मुस्ताङ, निलगिरि, तिलिचो हिमाल, कालीगण्डकीको विशालतम सेतो बगर, कागबेनी र मुस्ताङ वरपर नाच्न थाले । कति माया गथ्र्यो दोर्जीले पेमालाई । सिनेमा हेरेझैँ विगतका दृश्य एकपछि अर्को गर्दै झलझली आउन थाले पेमाको आँखावरपर । जति उसले पन्छाउन खोज्थी उति नै छिटो तिनै दृश्यसँग दोर्जी टुप्लुक्क आइहाल्थ्यो । ‘बुढेसकालमा पनि कसरी सम्झना आएको होला हँ हिजो जस्तै !’ पेमाले आफैँलाई प्रश्न गर्थी ।
छोराछोरी कलेज पढ्न थालेपछि पनि उसले पेमालाई काखमा राखेर म्वाइँ खान्थ्यो । पेमाको लामो कपालभित्र औँला छिराएर कोरिदिन्थ्यो । छार्का खोलाको सङ्लो पानीमा खेल्दै याक–चौरी र भेडा–च्याङ्ग्रा खेद्दै याकखर्क पुगेको कुरा सम्झाउथ्यो । साङ्ताका लेकमा पेमा लुक्दै उसलाई भेटन आएको कुरा त दिनमा दुई पटक दोहो¥याउथ्यो । शेफोक्सुण्डो तालजस्तै सफा र गहिरो तिनीहरूको प्रेम सन्तान विदेसिएपछि सेगुम्बानजिकका बालुवाका पहाडजस्तै जर्जर हुँदै निष्ठुर बगर भएर थुप्रिएको थियो ।
तीनै जना छोराछोरीले उनीहरू दुवै जनालाई केही सुइँको नै नदिई अमेरिकामा बिहे गरेको थाहा पाएपछि ती दम्पत्तिबीच झगडा, आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको थियो । पेमाको माया एकाएक आक्रोशमा परिणत भएको थियो ।
‘हामी छार्काबाट आएर पनि छोराछोरीलाई कलेजसम्मको शिक्षा दियौँ । विदेश नपठाऔँ, पठाउने नै हो भने पनि हाम्रो चलनअनुसार बिहे गरेर मात्र पठाइदिउँ, नत्र हामीलाई बुढेसकालमा रुन पर्छ । सुख र सुुविधाको हावाले केटाकेटीलाई छिटै छुन्छ । थाहै नपाई केटाकेटी आजको उदार, खल्लो र सस्तो माया जालमा फस्न सक्छन् । त्यसपछि चरा भुर्र उढेर गएझैँ उनीहरू हामी बाट टाढा हुन्छन् ।’ पेमाले बारम्बार भन्थिन् ।
‘बिहे गरेपछि पढाइ राम्रो हुँदैन । पढ्न खोजेका छन् । पढ्न दिऊँ । जान्छन् भने जान दिऊँ । ’ दोर्जीले सम्झाउँदै भन्थे । हुन पनि त्यस्तै भयो । बिहे गर्ने उमेर पुगेका छोराछोरी लुरुलुरु अमेरिका छिरे । आमाबाबुलाई खबरसमेत नगरी उतै घरजम गरेर बसे ।
‘पढेका छन् । राम्रो कम्पनीमा काम गर्छन् । इज्जत धानेका छन् । बिहे गरे त के भो । जीवन उनीहरूको हो यतैबाट आशीर्वाद देऊ । छोराछोरीले तिमीलाई दुःख दिएनन् । भै गयो त । किन पीर गर्छौँ । जमाना कहाँ पुगिसक्यो । यस्तोमा पीर गर्न हँुदैन ।’ नजिकका साथिभाइले सम्झाउँथे । तर त्यो काम लागेन । जेठो छोराले बिहे गरेको थाहा पाएको दिनदेखि दोर्जीको घरमा कालरात्रिले प्रवेश गरेको थियो ।
जीवनको उत्तराद्र्धमा भने पेमाको कुरा सही भएको दोर्जीले स्वीकारेका थिए । तर, त्यसबेला ढिलो भइसकेको थियो । ‘तैँले गर्दा धर्म, संस्कार र संस्कृति, नातागोता सबै सखाप भयो ।’ पेमाले बारम्बार भन्थिन् । उनको बोलीमा तीखो सुईरो भएको र त्यसले दिनहुँ घोच्ने गरेको दोर्जीले भित्रभित्रै निचोरिँदै अनुभव गथ्र्याे । पेमाको कचकच यति विघ्न बढ्यो कि उनका हरेक शब्दमा अर्जुनका तीखा वाण भएर दोर्जीको छातीमा पुगेर उनिन्थे । अप्रिय घटना दुवैबाट नहोस् भनी सचेततापूर्वक उनीहरू छुट्टाछुट्टै बसेका थिए । त्यसको पन्ध्र वर्षमा पेमाका पतिको मृत्यु भयो । एउटा सरल र सहज मृत्यु ।
पेमा र दोर्जीका सबै सन्तान तेस्रो दिन नै काठमाडौँ आइपुगे । पन्ध्र वर्षदेखि रित्तो भएको घर दोर्जीको मृत्युपछि भरिभराउ भयो । पेमाको घरको छानोबाट देखिने स्वयम्भूका दुई आँखाले तिनलाई हेरिरहेका थिए । एक पटक ती आँखामा तिनले दोर्जीलाई देखिन् । दोर्जीले उनलाई साङ्तामा पचपन्न वर्ष पहिले माया गरेजस्तै गरी अँगालोमा बाँधेको अनुभव गरिन् । त्यसैबेला डिलमा टक्क अढिएका दुई थोपा आँशु पछ्यौरीले पुछिन् ।
सबै जना भएर अस्पताल पुगे । अस्पताल प्रशासनसँग अनुरोध गरी दान गरिएको लाशलाई तीन घण्टासम्म एउटा छुट्टै कोठामा राख्ने अनुमति लिए । त्यसैबेला पेमाले आफ्नो लामालाई पनि बोलाएकी थिइन् । तीन घण्टासम्म जेठो छोरा दावा, बुहारी मेरिना र दुई नाति–नातिनी, छोरी याङ्जी र ज्वाइँ लिउ सान र दुई नाति, कान्छो छोरा बुद्ध, बुहारी पार्वती र एक नातिनी सबैले धित पुग्ने गरी दोर्जीलाई म्वाइँ खाए, दोर्जीको चिसो छातीमा अँगालो हाले । त्यसबेला सबैभन्दा बढी जेठो छोरा दावाले विलौना गरेको थियो ।
उसले बाबुको मृत शरीरको चौडा छातीमाथि टाउको राखेर ‘बाबा मलाई माफ गर्नुहोस् । मैले तपाईंको विशाल छातीभित्र छोराछोरीप्रति रहेको मायालाई बुझ्न सकिनँ । अमेरिका पुगेपछि मैले आमाबाबुलाई बिर्सेको मात्र होइन त्यसको मर्ममा प्रहार गरेँ । जन्म र शिक्षा दिने मेरा आमाबाबुलाई खबरै नगरी मैले अमेरिकामा घरजम गरेँ । आज मैले मेरा छोराछोरीलाई देखेपछि मात्र बाबाको जीवनमा परेको मर्मलाई महसुस गर्दै छु । आमाबाबुको अर्थ बल्ल बुझेको छु । तपाईंहरूलाई खबर नगर्नु मेरो कायरतापूर्ण अपराध हो । ’ रुँदै भन्यो । त्यस्तैमा तीन घण्टा सकियो ।
सबैले सम्झौतापत्र पढे । त्यसको फोटो मोबाइलमा खिचे । सम्झौतापत्रमा भनिए अनुसार बट्टामा राखिएको मुटुको टुक्राको एक अंश पशुपति आर्यघाट, एक अंश स्वयम्भू र एक अंश छार्काको लागि छुट्याए ।
दोर्जीले पूर्वजन्म, पूनर्जन्ममा विश्वास गर्दैनथे । तर संस्कृति बचाउनुपर्छ भन्नेमा भने दृढ थिए । सम्झौतापत्रसहितको एउटा कागजमा उनले लेखेका थिए – ‘मैले मुटु अस्पताललाई दान गरेको छैन । मेरो प्यारो मुटु मेरी पेमा, मेरा छोराछोरी, बुहारी, ज्वाइँ र नातिनातिनीको लागि हो । त्यसपछि मेरो मुटु सांस्कृतिक सहिष्णुताको धरोहर पशुपति, स्वयम्भू र म जन्मेको मेरो गाउँ छार्काका लागि हो । मेरो मुटु मेरो माटोलाई हो । बाँचुञ्जेल मैले राम्रो गर्न सकिनँ । मृत्युपछि कमसेकम मेरो लास डाक्टर बन्न चाहने नेपालका मेरा स–साना छोराछोरीलाई काम लागोस् ।’ सामान्य मात्र शिक्षा लिएका दोर्जीको सोचाइ कुनै दार्शनिकको भन्दा कम थिएन । देशमा चलेको चलनलाई उनले संस्कृति मानेर सम्मान गर्थे ।
यति एयरलाइन्सको जहाजबाट नेपालगञ्ज र त्यहाँबाट तारा एयरलाइन्सको चार्टर फ्लाइटबाट डोल्पाको जुफाल विमानस्थलमा ओर्ले दोर्जीको परिवार । पेमाबाहेक अरू सबैको त्यो पहिलो यात्रा थियो । बुहारी, ज्वाइँ र नातिनातिनीका लागि त त्यो अर्कै भूगोल थियो । जुफालबाट हिँडेको आठौँ दिनमा उनीहरू छार्का पुगे । छार्कामा लामा राखेर स्थानीय परम्पराअनुसार दोर्जीको मुटुको अन्त्येष्टि ग¥यो ।
छार्काको पुरानो घर मर्मत गरे । परिवार मिलेर दोर्जीको नाममा मुस्ताङ जाने बाटोमा छार्का खोलामाथि वर्ष दिनभित्र फलामको झोलुङ्गे पुल हाल्ने गरी लामामार्फत वडाका प्रतिनिधिलाई रकम दिए । छार्काको पश्चिम पाखोमा छार्का उपत्यकालाई हजारौँ वर्षदेखि हेर्दै बसेको कानीचोर्तेन (प्रवेशद्वार) र त्यसभित्र मेटिन थालेको भित्तेचित्र पुनर्निर्माण र पुनर्लेखन पनि वार्षिक तिथिभित्र सक्ने गरी कामको सुरुवात नै गरे । छार्का बोन गुम्बाको पूर्वमा रहेको थुम्कोमा दोर्जीको सम्झनामा छार्काको सबैभन्दा ठूलो चोर्तेन निर्माण गर्न जिम्मा दिए । त्यसभित्र सेनरेव, बुद्ध र दोर्जीको मूर्ति राखे ।
पेमा एकचालिस वर्षपछि छार्काको घर पुगेकी थिइन् । भेडा, याक र चौरीको सङ्ख्या घटेको थियो । त्यहाँको माटो झन् झर्झर, फुस्रो र सुख्खा भएको थियो । जेठो छोरा दावाका दौतरीहरूको जीवन पहिले भन्दा कष्टकर थियो । पचास वर्ष पहिले र पचास वर्षपछि त्यहाँ तात्विक फरक केहि थिएन । पेमा र दोर्जीबीच मनोमालिन्य भएर एक्लाएक्लै बसेर जीवन बिताए पनि एकचालिस वर्ष पहिले उनले सन्तानका लागि छार्का छोड्न गरेको निर्णय सहि भएको ठानिन् ।
पेमाले जेठो छोरा दावा र बुहारी मेरिनालाई भनिन् ‘जीवनमा दुःख त हुन्छ नै । दुःखका हाँगा फरक हुन्छन् । एक दिनमा अठार घण्टा काम गर्दा पनि दुई छाक पेटभर खान नपाउनु दुःख हो । प्रेम गर्दैमा छोराछोरीले आमाबाबुको छातीमा टेक्नु दुःख हो । दावा, तँलाई तेरो बाबुले धेरै माया गथ्र्यो । तँ ठूलो मान्छे भएको सुन्न आतुर थियो । तर तैँले बाबुको अर्थ र मर्ममाथि लात हानेको हुनाले तेरो बाबु जिउँदै मर्न बाध्य भयो । ऊ धेरै वर्ष मरेर पनि हिँड्यो । लोग्नेमान्छे भएर पनि क्षतविक्षत भयो । आखिरमा मेरो आक्रोशलाई सहन नसकेर पन्ध्र वर्षसम्म एक्लै जहरसिँह पौवामा बसेर प्राण त्याग्यो । तेरो बाबु इमान्दार मान्छे हो, दावा । तँलाई कहिल्यै तेरो बाबुको जस्तो दिन भोग्न नपरोस् । म पनि अब कति बाँच्छु र ? हामी एक्लाएक्लै बसे पनि बाँचुञ्जेल मलाई उसको र उसलाई मेरो भर थियो ।’
हजुरआमाले भनेको कुरा दावाले आफ्ना छोराछोरीलाई भनिदियो । ती दुवै रोए र हजुरआमालाई आश्वस्त पार्दै ठूलो नातिले भन्यो –‘हामी अमेरिकामा बसे पनि मम र ड्याडको हृदयमा चोट पार्ने काम गर्ने छैनौँ । हजुरबा र तपाईंलाई जस्तो पीडा दिने काम हामीले गर्ने छैनौँ । हजुरआमा अब तपाईं रुन हँुदैन । तपाईंलाई हामी रुन दिदैनौँ । तपाईं रुनुभयो भने हाम्रो छाती चिरिन्छ तपाईं नरुनु । ’
पेमाले नाति र नातिनीलाई अँगालो हालिन् र तिनीहरूका प्याउली पूmलजस्ता कोमल गालाबाट झरेका आँशु पुछिदिइन् ।
करिब पच्चीस वर्ष छोराछोरीको लागि आँशु झार्ने पेमा आपूm पचहत्तर लागेपछि दोर्जीलाई सम्झेर दिनको एक पटक रुन थालिन् । एक दिन उनले छोरीलाई भनिन्–
‘तिमीहरूले बिहे गरेको खबर पराइले भनेर थाहा पाएपछि हामी मर्माहत भयौँ । कोसँग बिहे ग¥यौँ भन्दा पनि आफूलाई जन्म दिने आमा र बाबुलाई तिमीहरूले हेला गरेकाले हामी जिउँदै मरेको अनुभव ग¥यौँ । हामीले सहज रूपमा स्वीकार गरेको भए पनि हुन्थ्यो, त्यसबेला हामी दुवैको धारणा एउटै भयो । स्वीकार गर्न सकिएन । ‘यो सबै तैँले गर्दा भएको’ हो भनेर मैले तेरो बालाई बारम्बार टोकेँ । यति टोके कि त्यसको चोट सहन सक्ने क्षमता नै मैले चुँडालिदिएँ । ऊ आफैँ पीडामा थियो । आफ्नो इज्जत, मान र प्रतिष्ठामा बाँचेको मान्छे । मरणासन्न अवस्थालाई जेनतेन बचाएर हिँडेको मान्छेलाई मैले सुईरोले घोच्थेँ । पछिल्लो समय त ऊ बोल्न छोडेको थियो । उसले सामान्य कुरा गर्दा पनि मैले डाकोले टिप्थे । तिमीहरूसँग विछोडिनुपर्दा मेरो स्वभाव नै बज्रजस्तो कठोर भएको थियो । दिनहुँको मेरो टोकसोले ऊ झन् मर्माहत भयो । क्षतविक्षत भयो र एक दिन घर चटक्क छोडेर हिँड्यो । त्यसबेला मलाई पटक्कै दुःख लागेन । म छार्काको बलौटे जर्जरे पखेरो जस्तै निष्ठूर र हृदयहिन भइसकेकी थिएँ । ’
छार्काबाट फर्कने बेला लामा राखेर फेरि पूजा गरिन् पेमाले । उनका दाजुका छोराहरूले स्याहार गरेको उनको बारी, पखेरा, छार्का खोला, गुम्बा, कानी चोर्तेन जताततै धुप बालिन् । लुङदार फहराइन । छार्काको एक चिम्टी माटो निधारमा दलिन् । अर्को एक मुठी माटो सानो बट्टामा सुरक्षित राखिन् । दाहसंस्कार, पूजा र बाबुको नाममा निर्माण गर्न लागिएको पुल र ठूलो चोर्तेन निर्माण, कानी चोर्तेन र त्यसभित्रको भित्तेचित्रको पुनर्निर्माण र पुनर्लेखन वर्ष दिनभित्र सक्नेगरी जिम्मा दिएर सबै काठमाडौँ फर्के ।
साँखु बजारदेखि चार किलोमिटर उत्तरमा रहेको जहरसिँह पौवा बूढाको निधनपछि सुनसान भएको थियो । एक दिन सबै जना त्यहाँ गए । दोर्जीले रोपेका धूपी, बेलौती, कागतीका बोट बडेमाका भएका थिए । ती सबै रुखबिरुवा र घरले दोर्जीको परिवारलाई नै पर्खेका जस्ता देखिन्थे ।
परिवारका सबै सदस्य काठको सानो घरभित्र छिरे । सोफानजिकको चिया टेबलमाथि कान्छो छोराले ग्रयाजुएसन गर्दा पठाएको कागजपत्र राख्न मिल्ने छालाको सानो झोला थियो । बैठक कोठामा पाँच वर्गफुटको फ्रेमभित्र सजाएर राखेको एउटा तस्वीर थियो । परिवारको पुरानो तस्वीरमा दोर्जी, पेमा, दावा, याङ्जी र बुद्ध थिए ।
जेठो छोरा दावाले बाबुले बोक्ने गरेको मोबाइल फोन चार्ज ग¥यो । उनको मृत्यु हुनुभन्दा एक घण्टा पहिले बाबाले आमा, अमेरिकामा रहेका उनीहरूलाई फोन गरेको थाहा पायो । अन्तिम कल उनले तिलगंगा र शिक्षण अस्पतालमा गरेका रहेछन् ।
कोठा, भान्साघर नियालेर हेरेपछि पेमाले टेबलमा रहेको झोला खोलिन् । भित्र भएका काजगपत्र निकालिन् । त्यसमा लालपूर्जा, चेकबुक, एटिएम कार्ड, बत्तीको कार्ड, कर बुझाएका रसिद, नागरिकताको प्रमाणपत्र, आँखा र लास दान गर्दाको सम्झौतापत्र र केही रकम थियो ।
आमाको खुट्टामा लम्पसार परेर जेठो छोरो दावाले आँशुका बलिन्धारा झार्दै भन्यो– ‘आमा हामीलाई माफ गर । मैले गर्दा यस्तो भयो । मैले आमा र बालाई सम्झाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यसबेला मैले कठोर सत्यको सामना गर्न सकिनँ । प्रेमले गर्दा म कायर भएको थिएँ । मेरी श्रीमती मेरिनाले बारम्बार ‘आमा र बालाई भनेर स्वीकृति लिएर मात्र बिहे गरौँ । पछि हुने सङ्कटलाई पहिले नै समाधान गरौँ । त्यसो गर्दा पछि सुख हुन्छ’ भन्थिन् । मेरो कायरपनले त्यो आँट गर्न सकेन । पछि बहिनी र भाइले पनि मेरो कुबाटोलाई पछ्याए । गल्तिमाथि गल्ति थुप्रिँदै गए । बा र आमाले सन्तानलाई माफ गरिहाल्छन् र हामीलाई आशीर्वाद दिनेछन् भन्ने कल्पनामा मात्र म बसेँ । मैले आमा र बाबाट भित्रभित्रै आशीर्वाद मागेँ । दशैँ, नयाँ वर्ष, ल्होसार, सबै पर्वमा हामी एक्ला भयौँ र रोएर दिन गुजा¥यौँ । आखिर हाम्रो कारणले बा र आमाको चालिस वर्ष लामो दाम्पत्य जीवन विछोडको उपहार लिएर दुईतिर बाँडियो । झन् मिलेर बस्नुपर्ने उमेरमा एक्लाएक्लै बिताउनुप¥यो । त्यो मैले गर्दा भएको हो ।’ आमाको काखमा टाउको घुसार्दै दावा धेरै बेर रोइरह्यो ।
‘अब रोएर के काम भो र ? न रो । तेरो बाबुलाई झैँ सन्तानले गर्दा तँलाई रुन नपरोस् ।’ दावालाई उठाउँदै आमाले सम्झाइन् ।
जन्म र मृत्यु नित्य प्रक्रिया हो; भइरहन्छ । कहिले कस्को परिवारमा त कहिले कस्को ? त्यो नै संसार हो । त्यो नदीजस्तै निरन्तर बगिरहन्छ । मात्र फरक के भने त्यसबेला त्यो पेमाको घरमा परेको थियो । पेमाको दुई जनाको सानो परिवार दोर्जीबाहेक पनि बाह्र जनाको ठूलो भइसकेको थियो ।
छोराछोरीले पेमालाई सँगै अमेरिका लैजान निकै प्रयास गरे । उनी पचहत्तर टेकेकी थिइन् । सबैका आमाबाबु प्रत्येक वर्ष अमेरिका गएको उनले देखेकी हुन् । उनी गएकी छैनन् । नगएकोमा दुःखी पनि छैनन् । जान चाहे उनी उड्न सक्छिन् ।
‘बाबु बितेको एक वर्ष म कतै जान्नँ । प्रत्येक महिना स्वयम्भू, बौद्ध र किराँतेश्वरमा बत्ती बाल्छु दोर्जीको नाममा । अब म डोल्पा जान्नँ । एक दिन साङ्ता मेरो माइतीमा जान मन छ । तिमीहरूले मेरो पीर नमान्नु । तिमीहरूको जीवन सफल पार । केटाकेटीको राम्रो ख्याल गर्नु । नेपाली लेख्न र बोल्न सिकाउनु । कम्तीमा मिलाएर वर्षको एक पटक नेपाल आउनु । आफ्नो देश, तिमीहरूको जन्मथलो छार्का र मामाघर साङ्ता अनि मेरो र दोर्जीको पसिना परेको माटोलाई कहिल्यै नबिर्सनु ।’ पेमाले आफ्नो निर्णय सुनाउँदै अर्तीउपदेश दिइन् ।
अमेरिका उड्नुभन्दा पाँच दिनअघि आमाको काखमा ढल्केर कान्छो छोरा बुद्धले भन्यो –‘आमा म अमेरिका जान्नँ । तपाईं र बाबाले सृष्टि गरेको सुन्दर बगैँचामा गोडमेल गर्छु । तपाईंले टेकेका पाइलामा मलजल गरेर मेरो भविष्य सपार्छु । तपाईंलाई पनि नियास्रो हुँदैन । ’
यो कुरा त मैले तेरो बाबुलाई बिस वर्ष पहिले भनेकी थिएँ । तेरो बाबुले –‘छोराछोरीलाई बोझ पारेर उनको भविष्य बिगारेर मेरो बुढ्यौली सुधार्नु छैन । म जसरी बाँच्छु ठीकै छ । तर, मेरा लागि छोराछोरीलाई दाउमा लाउँदिनँ ।’ भन्थे । ‘पचहत्तर वर्षकी भए पनि तेरो र तेरा सन्तानको भविष्यसँग खेल्ने स्वार्थ ममा छैन । तेरा बाबु मरेर गए । छोराछोरीलाई सक्षम बनाउने उनको फराकिलो सोचलाई म मार्दिनँ । तँ जा । देशलाई सम्झिरहनु । मान्छे रोएर केहि हँुदैन । माटोलाई कहिल्यै रुन नपरोस् । ’
केटाकेटीको फर्कने बेला भयो । सम्झँदा मात्र पनि पेमाको मन कटक्क खान्थ्यो । तर पछिल्ला दिनमा छोराछोरी, बुहारी, ज्वाइँ र नातिनातिनीले देख्ने गरी उनले आँशु झारिनन् ।
सबैजना विमानस्थल पुगे । छार्काबाट ल्याएको माटोको टिका बिदाइको दिन सबैको निधारमा लगाइदिइन् । सबैलाई अँगालो हालेर मुटुको धड्कन सुनिन् । आँशुका बलिन्धारा झार्दै एघार जनाको लस्कर विमानस्थलभित्र छि¥यो । पेमाले निकै बेर हात हल्लाइरहिन् । कतार एयरलाइन्सको विमानले काठमाडौँ उपत्यका नाघेपछि मात्र उनी फर्किन् । त्यस दिन उनलाई स्वयम्भू जान मन लागेन । त्यताबाट बौद्ध हुँदै दोर्जीको घर जहरसिँह पौवातिर लागिन् ।
जुनेली रात । जुन टहटह लागेको थियो । पूर्वमा गौरीशङ्करदेखि उत्तरतिरका जुगल, दोर्जी ल्हाक्पा र लाङटाङ हिमाल जुनको उज्यालोमा प्रष्ट देखिन्थे । साङ्ताका पखेरामा नीलगिरि हिमाललाई साक्षी राखेर रातभर उनी दोर्जीसँग पिरती गाँसिन् । चराचुरुङ्गीको चिरबिर सुरु भयो । नगरकोटतिरको आकाशमा देखिएको सुनौलोपनले बिहानीको उद्घोष गर्दै थियो । बिहान ब्युँझदा दोर्जी र साङ्ता बाहेक सबै कुरा विपनामा झैँ उनको वरपर छचल्किएका थिए । धेरै वर्षपछि सपनामा दोर्जीलाई देख्दा मात्र पनि उनको अनुहार उज्यालो देखिन्थ्यो ।
फोनः ९८४१३७७०८३ , bishnu.nmdc@gmail